कसरी हुन्छ बूढीगण्डकीको सेयर वितरण ? आयोजना लगानीयोग्य बनाउन सरकारको करिब एक खर्ब अनुदान « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
कसरी हुन्छ बूढीगण्डकीको सेयर वितरण ? आयोजना लगानीयोग्य बनाउन सरकारको करिब एक खर्ब अनुदान
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु पाँच करोड रकम मुआब्जाका लागि वितरण गरिएको थियो भने चालु आवमा रु १० अर्ब रकम मुआब्जामा वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ । आयोजना प्रभावितलाई रु ६३ अर्ब रकम मुआब्जामा वितरण गर्नुपर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।